Somaliland: Faysal Cali Waraabe Oo Madal Uu Madaxweynuhu Fadhiyey Ku Dhaliilay Siyaasadda Dhaqaalaha Ee Xukuumadda & Tirada Wasiirrada - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Faysal Cali Waraabe Oo Madal Uu Madaxweynuhu Fadhiyey Ku Dhaliilay Siyaasadda...
“Madaxweynuhu wuxuu qabtay waxa lagu sheegay Gabaygii (Madasha laga jeediyey), laakiin intaa Wasiirradiisu ma sheegi karaan….”
“Annagu waxaanu doonaynaa inaanu Wasaaradaha Dawladda yarayno, oo aanu 13 ka soo reebno 68-dan (Xukuumadda KULMIYE ka kooban tahay)…” Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah Ee UCID
Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID, ahna Musharraxa Xisbigaasi Eng. Faysal Cali Waraabe, ayaa sheegay in Siyaasadda Dhaqaalaha ee Xukuumadda KULMIYE Dalka ku dhaqaysaa ay tahay mid fursad siinaysa in Dhaqaaluhu uu Cid gaar ah Gacanta u gelo, laakiin Xisbiga KULMIYE uu la iman doono Siyaasad taasi ka duwan.
Guddoomiye Faysal Cali Waraabe oo Shalay hadal ka jeediyey Munaasibad uu Madaxweynuhu ka qayb-galay oo lagu furay Wejiga labaad ee Qorshaha Horumarinta Qaranka Somaliland, ayaa sheegay in haddii Xisbiga UCID uu talada Dalka ku guuleysto uu 13 Wasaaradood ku soo koobi doono 68 Wasiir oo uu sheegay in Xukuumadda Xilligan ee KULMIYE ka kooban tahay.
Musharraxa Xisbiga UCID oo Arrimahaa ka hadlayaana wuxuu yidhi “Siyaasadda dhaqaalaha ee Xisbiga KULMIYE waa Siyaasad uu dhaqaaluhu Dad gaar ah Gacanta u gelayo iyo Kooxo isku tagay. Annagu waxaanu doonaynaa inaanu Wasaaradaha Dawladda yarayno, oo aanu 13 ka soo reebno 68-dan (Xukuumadda KULMIYE ka kooban tahay).”
Faysal oo hadalkiisa sii wata, ayaa sheegay in Xafiis kasta oo Dawladeed ay u Magacaabi doonaan Qof Aqoontiisa leh, isla-markaana aanu jiri doonin Wasiir aan aqoon lahayn oo Xilka Ummadda loogu dhiibo Dano-siyaasadeed, “Meel kasta waxaanu dhigi doonaa Qof Aqoonteeda leh, Wasiir aan Cilmi lahayn oo Siyaasad loo keenay (Xilka loogu dhiibay) Reerkooda ayuu ku noqon doonaa.” Ayuu yidhi, waxaanu isagoo tix-raacaya Gebay lagu amaanay Madaxweynaha oo Madasha Shirka laga soo jeediyey uu sheegay in Golaha Wasiirradu aanay si hufan u soo bandhigi karin Waxqabadka Madaxweynaha, “Madaxweynuhu wuxuu qabtay waxa lagu sheegay Gabaygii (Madasha laga jeediyey), laakiin intaa Wasiirradiisu ma sheegi karaan.”
Guddoomiyaha UCID waxa kale oo uu ka hadlay dhibaatada dhaqaale ee Qaadku ku hayo Somaliland iyo Dadkeeda, “Waddan faqiir ah oo habeen walba ay Xuduudkiisa ka tallaabayaan 3 boqol oo kun oo Dollar oo Qaad lagu soo iibinayo, ma hirgelin karo Qorshaha Horumarinta Qaranka, markaa waxaan soo jeedinayaa in Lacagtaa Adag ee Birta Itoobiya lagu iibsanayo in la mamnuuco oo aan si fudud loogu adeegsan (Dalka Gudihiisa), Waayo? Dollarka lagu iibsaday Birta waxa (Itoobiya) lagaga furtaa LC, Lacagteeniina waxay ka baxdaa Wajaale.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa sii raaciyey in Xisbiga UCID oo Dalka ka joojin doono Lacagta Birta Itoobiya, haddii uu talada Dalka ku guulaysto “Annagu waanu joojin doonaa Lacagtaa (Birta ah), Itoobiyana waanu la Macaamili doonaa, laakiin Macaamilku waa inoo noqdaa Macaamil siman.”
Somaliland: Guddida Anshaxa Komishanka Doorashooyinka Oo Mar Labaad Fariin Digniin Ah U Diray Saddexda Xisbi Qaran
Diyaarad Siday Dhallinayaro Reer Somaliland Ah Oo Loo Diiday Inay Soo Fadhiisato Madaarka Cigaal Iyo Garowe Oo Laga Dejiyey